ပြည်သူ့: " ပို. ပို. လှပသော!": Laurence Boccolini သည်သူ၏ပြပွဲ၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းကသူ၏အသစ်အကြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအံ့သြစေတယ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "လူတွေက:"! ပို. ပို. လှပသော "Laurence Boccolini သည်သူ၏ပြပွဲ၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းကသူ၏အသစ်အကြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအံ့သြစေတယ်
Laurence Boccolini ပြန်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် Animation အပေါ်ပါ! မိမိအပြပွဲ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေ TF1 စနေနေ့ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်တန်းနည်းပြပြီးသားပစ်ခတ်မှုအချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Публикацияот Laurence Boccolini (@lolobocco) 22 2019 Авгв 5: 12 PDT ရန်ကုန်
သူမ၏ဓာတ်ပုံများ Instagram ကိုအပေါ်ဘက်ဇ်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ထိုအခါအကြောင်းပြချက်! mum Willow ပင်ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့် resplendent ပြသခဲ့ပါသည်နှင့်သူ၏ပရိသတ်များကသူ၏ပြောင်းလဲမှုလစျြလြူရှုကျန်ရစ်ကြပြီမဟုတ်။
သငျသညျတောက်ပနေကြသည် .... ငါသည်ဤဓာတ်ပုံကိုကိုးကွယ်💖
ပိုပြီးလှပ ... အမြဲတမ်းပြုံးနေ။
SUPER Laurence ❤️ဒီဖြတ်ဝတ်စုံသင်သည်အလွန်ကောင်းစွာနဲ့သင်ရုံ MAGNIFAIIIIKKKKK နေ
Публикацияот Laurence Boccolini (@lolobocco) 22 2019 Июлв 2: 00 PDT ရန်ကုန်
Laurence သူ၏နောက်လိုက် surprising ရပ်တန့်မထားပါဘူး။ မကြာသေးမီကသည်တင်ဆက်သူ TF1 ကျောင်းတစ်နှစ်၏အခါသမယအပေါ်တစ်ဦးရွေ့လျားနေသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အလွန်ပြောင်းရွှေ့, Laurence သူမ၏သမီး Willow ကစားကွင်းပြန်လည်မြင်တော်မူ၏။ "ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုအိမ်ကဟစျကျွောလေ၏"သူမဟာအပ်နှင်းခဲ့သည်။
Публикацияот Laurence Boccolini (@lolobocco)32019 вСен 11: 49 PDT ရန်ကုန်
PHOTOS ။ Clara Morgan သူမ၏ခင်ပွန်းဂျယ်ရမီမှာ Oliver ပါသလဲ